RASMI: Kooxda Barcelona oo xaqiijisay xilliga ay soo bandhigayso Frenkie de Jong – Gool FM
(Spain) 2 Luulyo 2019. Kooxda Barcelona ayaa shaacisay maanta oo Talaado ah xilliga ay soo bandhigayso xiddigeeda cusub khadka dhexe ee Frenkie de Jong.
Bayaan ay soo saartay koooxda Barcelona isla markaana ay ku xaqiijisay soo bandhigista Frenkie de Jong oo lagu daabacay website-keeda rasmiga ah ayaa lagu sheegay in maalinta Jimcaha ee soo aadan taariikhdu ay tahay 5-ta Luulyo, lasoo bandhigi doono laacibka reer Holand.
Xaflad weyn ee loogu soo bandhigi doono Frenkie de Jong saxaafada iyo jamaahiirta ayaa ka dhici doonta Jimcaha soo aadan garoonka Cump Nou sacada marka ay tahay 7.00 pm CEST.
Frenkie de Jong ayaa saxiixi doono heshiis 5-ta xili ciyaareed soo aadan ku heyn doona garoonka Cump Nou, ee gaaraya ilaa iyo Juun 2024, iyadoo heshiiska lagu qiimeeyay inuu ku kacay aduun dhan 75 milyan euro oo lagu daray 11 milyan ee ah lacagaha kala wareejinta.
Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa ka qeyb gali doono xaflada soo bandhigida Frenkie de Jong ee ka dhici doonta garoonka Cump Nou maalinta Jimcaha soo aadan, iyadoo sidoo kale ay ku maqaal tahay in xaflada ay kasoo qeyb gali doonaan qaar ka mid ah madaxda Blaugrana.
Warbixintan ay soo saartay Kooxda Barcelona ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in soo gali taanka garoonka Cump Nou inta xaflada ay socoto maalinta Jimcaha ay noqon doonto mid bilaa lacag ah ama bilaash ah, iyadoo qorshaha uu yahay inay soo xaadiraan tirada taageerayaasha ugu badan.